Fisorohana ny fanodikodinana ny volam-panjakana sy ireo famatsiam-bola azon’ny fanjakana no tanjona ka apetraka ny fampahafantarana sy fampianarana, , ny fitsirihana ary ny fananganana rafitra fiarovana.Fomba fiasa tsy maintsy tanterahana ny fanajana ny etika sy ny mangaraharaha amin’ny fikarakirana ny volam-panjakana; tsapa mantsy fa tena nirongatra tato ho ato ny fanodikodinana volam-panjakana sy ny kolikoly teto amintsika hoy ny tale jeneralin’ny Bianco.Fomba ratsy izay mampitarazoka ny fampandrosoana.
KANDIDA TALE JENERALIN’NY BIANCO
Antontan-taratasy miisa 3 hatramin’izao no fantatra fa voarain’ny Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) mba hisafidianana izay ho tale jeneraly vaovao hitantana ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (BIANCO).Ny faramparan’ny volana jolay mantsy no mitsahatra amin’ny asany ny tale jeneraly am-perinasa.
Tolon’ny mpianatra madiodio no tena fototry ny tolon’ny 13 mey 1972 hoy i Maitre Olana izay mpitari-tolona tamin’izany. Nitaky ny tena hahaleovan-tena tanteraka tamin’ny frantsay ireo mpianatra ireo ka nahatonga azy ireo nitolona sy tsy nanaiky ny tarazoka teo amin’ny frantsay. Tao aorian’ny 13 mey va tena niditra ireo mpanao politika izay niafara tamin’ny fanonganana ny fitondrana nijoro tamin’izany.
MPANALA BARAKA ANATY FACEBOOK
Mitohy ihany ny fanenjehana ireo mpanao fanalam-baràka amin’ny facebook. Miompana amin’ny fitsirihana ireo kaonty sandoka sy noforonina mba hanaratsiana olona ny manam-pahaizana amin’ny cybercriminalité ankehitriny. Misy hatramin’ny minisitra ny mpitory ary manome baiko ny hanaovana savahao ireo olona mpandika lalàna amin’ny tambajotra sosialy.
OLAN’NY TAOVAM-PISEFOANA MAHAFATY
Mitombo isa ny olon-dehibe izay mamoy aina amin’izao fanombohan’ny vanin’andro ririnina izao. Ny olana amin’ny taovam-pisefoana no miteraka fijanonan’ny fo tampoka raha araka ny fanazavan’ny mpitsabo izay nanontaniana. Isan’ny olana anefa, rehefa tonga eny amin’ny sampana fameloman’aina ka tsy miaraka amin’ny olona izay misy vola ireo marary dia jerijerena fotsiny ary maty eo anoloan’ny toeram-pitsaboana ny ankamaroany.
Raha tsy ny ray aman-dreny ara-drazana no nandamina ny sain’ny olona mba tsy hamonoana ny tovolahy iray izay sarona nangalatra lavanila dia efa vita ny aminy. Tany Sambava no voasambotra ilay lehilahy teo am-panaovana ny asa ratsiny. Vetivety dia efa vory ny olona izay niaraka tamin’ny lasantsy, ny antsibe sy ny afo. Na ny mpitandro ny filaminana aza efa very hevitra tamin’ny fandaminana ny raharaha. Niditra an-tsehatra ireo olo-be ary voalamina ihany ny raharaha ka afaka nentina mora teny amin’ny biraon’ny mpitandro ny filaminana ilay mpangalatra.
NANOKAFANA FANADIHADIANA IREO POLISY 3
Nanokafana fanadihadiana eo anivon’ny sampan-draharaha miadidy ny heloka vitan’ny polisy ireo telo lahy izay eo anivon’io vondrona io. Nandona fiaran’olona teny Ivandry rehefa mamo be ireto mpitandro ny filaminana telo izay amperinasa ary manao fanamiana polisy. Soa fa nahafantatra olona izay misahana ny heloka vitan’ny polisy ny olona teo amin’ny manodidina ary nahasahy niantso avy hatrany. Dia raha sendran’ny olon-tsotra tsy mahalala olona sy tsy sahy izany dia vitavita foana teo indray ny raharaha.
Taxi-be zotra 178 avy any Ambohijatovo no tapaka hisatra omaly atoandro. Avy any Ambohijatovo ity fiara nanana olana ity no nirifatra ary teny Andohan' Analakely eo amin'ny "rond point" vao tafajanona. Tsy nisy ny namoy ny ainy na naratra fa ny fiara no simba.Manaporofo izao tranga izao fa misy ny fiara mpitatitra eto an-drenivohitra manana olana ara-teknika sy mety tsy ampy fikojakojana ary dia mampidi-doza.
Nodimandry omaly alatsinainy 13 mey teo amin’ny faha 60 taonany Parfait Lalanirina mpanorina sady lehiben’ny tarika VHF (Vavaka Hira Fiderana).Maty irery tao an-tranony izy raha araka ny fantatra satria mbola tsy eto an-toerana ny vady aman-janany.Nambaran’ireo mahalala azy koa fa efa notezain’ny aretim-po i Parfait.
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA RN 2
Fiara mpitatitra Sprinter ho any Moramanga indray no tra-doza omaly maraina teny Andriaka amin’ny lalam-pirenena faha 2. Voalaza fa nandeha mafy ity fiara ity, ka tena tafavoaka ny arabe sy nivadika ambony ambany mihitsy .Tsy nisy aloha ny maty fa nisy kosa ireo naratra ka nisy ankizy tao anatin’izany.
Mitombo isa ankehitriny ny zaza Malagasy voan’ny Hydrocephalie na ilay aretina mampivonto sy mahangeza ny loha.Ny fitomboan’ny hadirin’ny toerana misy ilay ranon’atidoha antsoina hoe “liquide cérébro-spinal” no mahatonga ny loha hihangeza.Ny aretina “Méningite” matetika no mahatonga azy ity.
TSY AMPY NY MPAMPIVELONA
Tena tsy ampy mihitsy ny isan’ireo mpampivelona eto Madagasikara.Mampivelona 1 ho an’ny olona 1000 ny eto Madagasikara rahatoa ka mpampivelona iray ho an’ny olona 500 no fenitra iraisam-pirenena.